Otú nyefee iTunes Library ka New Computer
> Resource> iTunes> Nyefee iTunes Library ka New Computer
"M na-zụtara a ọhụrụ laptọọpụ. Ana m eche otú nyefee iTunes Library si m ochie PC ndị ọhụrụ laptọọpụ. M nwere ọtụtụ narị songs, ọtụtụ nke listi ọkpụkpọ, na ụfọdụ Movies m na-ele na iTunes Library. Bụla echiche? "- Jenny
Ọ bụ isi na-awa maka ndị na-chọrọ nyefee iTunes Library ọhụrụ kọmputa, n'ihi na Apple nanị na-ahapụ ọrụ enweta ihe ha na-na na zụtara si iTunes Store ọhụrụ na kọmputa. Dị ka music na vidiyo si isi mmalite ndị ọzọ, ọrụ nwere ike ida ha ruo mgbe ebighị ebi. Dabara nke ọma, ụfọdụ ẹdude ụzọ nwere ike idozi nsogbu ahụ. Na-esonụ, anyị na-aga ikwu okwu banyere otú nyefee iTunes Library ọhụrụ kọmputa mgbe mbenata ize ndụ nke ịdapụ faịlụ, karịsịa songs na vidiyo zụtara si isi mmalite ndị ọzọ bụghị iTunes Store.
Nyefee Music, Songs, na Photos si iTunes Library ka New Computer
Ọ bụrụ na ị na-iTunes onye ọrụ, N'ezie, i nwere otu Apple ngwaọrụ, iPhone, iPad, ma ọ bụ iPod, nri? Tupu ebufe iTunes ọhụrụ kọmputa, ị kwesịrị mmekọrịta gị na iTunes Library na gị Apple ngwaọrụ. Biko hụ na ị na-agafere niile mkpa music, videos, ọbụna listi ọkpụkpọ gị Apple na ngwaọrụ ma wee soro nzọụkwụ n'okpuru ịmụta otú ịkwaga iTunes Library ọhụrụ na kọmputa.
Nzọụkwụ 1. Download na wụnye TunesGo
Pịa Download iji nweta TunesGo echichi ngwugwu. Wụnye ngwa a na kọmputa gị. Ma TunesGo (Windows) na TunesGo (Mac) dị. Get nri version maka kọmputa gị. Na-esonụ, m ga-ekwu okwu banyere otú iji TunesGo (Windows) nyefee music, songs, listi ọkpụkpọ, na foto ọhụrụ kọmputa.
Jiri eriri USB gị Apple ngwaọrụ abịa na jikọọ na ngwaọrụ gị na kọmputa na ẹkedori TunesGo. Ebe ọ bụ na ị na synced ihe niile si iTunes Library na ngwaọrụ, mgbe TunesGo ịchọpụta ngwaọrụ, ọ ga-egosipụta music, vidio, na foto, wdg ke akpan window.
Nzọụkwụ 3. Nyefee iTunes Library ọhụrụ kọmputa
Ugbu a, ị nwere ike họrọ mkpa songs, videos, listi ọkpụkpọ, na photos na isi window na pịa "Export ka" mbupụ ha ọhụrụ gị iTunes Library ma ọ bụ obodo na diski ike na ọhụrụ na kọmputa.
Cheta na: Ugbu a naanị TunesGo (Windows) na-akwado na-ebufe ndetuta egwu ọkpụkpọ ka ọhụrụ na kọmputa.
Nyefee iTunes Store ịzụrụ na iTunes Library ọhụrụ Computer
N'ihi na ụfọdụ iTunes Store zụrụ ihe, dị ka ngwa ọdịnala, ị nwere ike nyefee ha si iTunes Library ọhụrụ kọmputa mfe. Ikike ọhụrụ gị na kọmputa> Jikọọ na gị Apple ngwaọrụ na kọmputa> Right pịa gị Apple ngwaọrụ n'okpuru Ngwaọrụ na iTunes isi window> Họrọ "Nyefee ịzụrụ".